Sheller စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Sheller ထုတ်လုပ်သူများ
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် လယ်ယာသုံး မြေပဲကျည်ထိုးစက်
မြေပဲအခွံခွာစက်သည် အခွံခွာရန်၊ လေတိုက်ရန် အဓိကရွေးချယ်မှု၊ သီးခြားဆွဲငင်အား ခွဲခြားခြင်းနှင့် ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်ထားသော မြေပဲစေ့များကို အိတ်များထဲသို့ အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။၎င်းတွင် ရိုးရှင်းပြီး ကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လွယ်ကူမှု၊ အခွံခွာခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းအချိုးအစား၊ လုပ်အားခြွေတာမှုနှင့် လုပ်သားခြွေတာမှု အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် မြေပဲခွံခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ စပါး သိုလှောင်ရုံများ၊ ဆီ ပြုပြင်ရေး စက်ရုံများနှင့် အစားအသောက် လုပ်ငန်းများ။၎င်းသည် ကျေးလက်ဒေသနှင့် ပန်းထုတ်သည့်နေရာများတွင် တစ်ဦးချင်းကျွမ်းကျင်သော အိမ်ထောင်စုများအတွက် စံပြကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။မြေပဲခွံအခွံသည် ကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူခြင်း၊ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ မြင့်မားသောအခွံခွာခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ မြေပဲကွဲထွက်နှုန်းနည်းပါးခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောအမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းနည်းပါးခြင်းတို့၏ အားသာချက်များရှိသည်။
1. အခွံခွာခြင်းနှင့် လှိမ့်ခြင်းနည်းလမ်းသည် သံကြိတ်စက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဆန်ခါခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းတို့ဖြင့် ခြောက်သွေ့သောအခွံခွာခြင်းဆိုင်ရာ နိယာမကို လက်ခံပါသည်။
2. အခွံပါသော အစေ့များ ကွဲထွက်နှုန်း အလွန်နည်းပြီး အခွံကို သံပြားမှုန့်ဖြင့် ပက်ဖြန်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လှပပြီး တာရှည်ခံပါသည်။
3. မော်တာဗို့အားသည် 220V ဖြစ်ပြီး ပါဝါမှာ 3KW ဖြစ်သည်။ကြေးနီဝိုင်ယာမော်တာအသစ်သည် သက်တမ်းပိုရှည်သည်။
4. ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်သော အထူးဆံပင်လေမှုတ်စက်တွင် အစေ့များကို အခွံနှင့် ထိထိရောက်ရောက် ခွဲထုတ်နိုင်ပြီး မျိုးစေ့ပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် အလယ်အလတ်လေနှင့် လေအားပင် ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။
5. အခွံခွာစက်တွင် အရည်အသွေးမြင့် universal wheels များ တပ်ဆင်ထားပြီး ရွေ့လျားရလွယ်ကူသည့် ထူးခြားသော ဘေးဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။
6. သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ အကျိုးရှိစွာနှင့်အဆင်ပြေသည်။အခွံခွာနှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် 800-900 catties (မြေပဲသီး) အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး အခွံခွာနှုန်းသည် 98% ကျော်ပါသည်။
စပါးခြွေလှေ့စက်၏ အဓိကလုပ်ဆောင်သည့် အစိတ်အပိုင်းမှာ စက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ရဟတ်ဖြစ်သည်။ရဟတ်သည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် လှည့်ကာ ဒရမ်ကို ခြွေလှေ့ရန် ထိမှန်သည်။စပါးကို ဆန်ခါအပေါက်များဖြင့် ပိုင်းခြားထားကာ ပြောင်းဖူးစပါးကို စက်၏အမြီးမှ ဖယ်ထုတ်ကာ စပါးပိုးနှင့် အရေများကို ကျူရီယာမှ ဖယ်ထုတ်သည်။feed port သည် စက်၏အပေါ်ပိုင်းအဖုံး၏ အပေါ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ပြောင်းဖူးစပါးသည် စပါးရိတ်သိမ်းခန်းထဲသို့ စပါးအပေါက်မှတစ်ဆင့် ဝင်လာသည်။ခြွေလှေ့ခန်းတွင် မြန်နှုန်းမြင့် လှည့်ရဟတ်၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် ပြောင်းဖူးစေ့များ ပြုတ်ကျကာ ဆန်ခါတွင်းများမှတစ်ဆင့် ကွဲထွက်သွားသည်။ပြောင်းဖူးစေ့များ ပြုတ်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အစာဝင်ပေါက်၏ အောက်ဘက်တွင် baffle တစ်ခု ပါရှိပြီး လူကို ထိခိုက်နာကျင်စေကာ ၎င်းသည် အသုံးအများဆုံး ချွေတာသော ခြွေလှေ့စက်ဖြစ်သည်။စပါးခြွေလှေ့အသစ်တွင် သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူမှု၊ လည်ပတ်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်းစသည့် အားသာချက်များစွာရှိသည်။စပါးခြွေလှေ့သည် အဓိကအားဖြင့် စခရင်ကာဗာ (ဒရမ်)၊ ရဟတ်၊ အစာကျွေးကိရိယာ နှင့် ဖရိမ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။မျက်နှာပြင်နှင့် အပေါ်ဖုံးရဟတ်သည် ခြွေလှေ့ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ရဟတ်သည် အဓိကလုပ်ဆောင်သည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ပြောင်းဖူးကို ခြွေသည်။စပါးနယ်ခန်းထဲမှာပဲ ပြီးသွားတယ်။
ဂျုံ၊ ဆန်၊ ဆန်စပါး၊ ပြောင်းဆန်နှင့် ပဲများကို ခြွေလှေ့ရန် အဓိကအသုံးပြုသည်။ဂျုံ၊ ဖွဲနု၊ ကောက်ရိုးနှင့် ဂျုံပိုလျှံသော ဂျုံကို လေးမျိုးခွဲ၍ ကျွေးနိုင်သည်။၎င်းတွင် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုအဆင်ပြေစေမည့် အားသာချက်များရှိသည်။
ဆန်နှင့် ဂျုံနယ်သည့် ခြွေလှေ့သည် အဓိကအားဖြင့် စားပွဲ၊ ဘောင်၊ ရှိုက်မျက်နှာပြင်၊ ဗုံဖြုတ်ခြင်း၊ စက်အဖုံး၊ လမ်းညွှန်ပန်းကန်၊ ပန်ကာ၊ တုန်ခါသည့် မျက်နှာပြင်နှင့် ဂီယာစက်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ကြိတ်ချေမှုနှုန်း နည်းပါးသည်၊ ဖယ်ရှားမှုနှုန်း မြင့်မားပြီး ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းလည်း နည်းပါသည်။ပြန်မထုတ်ဘဲ တစ်ကြိမ်တည်း ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ဤပြောင်းဖူးခြွေလှေ့ကို တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေး၊ ခြံနှင့် အိမ်သုံးများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့ကို စပါးအခွံခွာပြီး ခြွေလှေ့ရာတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ခြွေလှေ့သည် ပြောင်းဖူးစေ့များကို ပြောင်းဖူးများကို မထိခိုက်စေဘဲ အံ့သြဖွယ်အရှိန်ဖြင့် ပြောင်းဖူးစေ့များကို ခွဲထုတ်သည်။ခြွေလှေ့စက်တွင် မတူညီသော မြင်းကောင်ရေ လေးမျိုးဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်- ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ လျှပ်စစ်မော်တာ၊ လယ်ထွန်စက် ခါးပတ် သို့မဟုတ် ထွန်စက်အထွက်။ပကတိအခြေအနေအရ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။သွားလာရလွယ်ကူစေရန်အတွက် တာယာ မြင်းကောင်ရေအား ပံ့ပိုးမှုဘောင်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။